ओलीको प्रस्तुती किन फितलो ?::Point Nepal
ओलीको प्रस्तुती किन फितलो ?
काठमाडौं, २५ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उखान टुक्का र व्यङ्ग्य गर्दै विपक्षीलाई चोटिलो प्रहार गर्न खप्पिस छन् । उनको अभिव्यक्तिले वि´रोधीलाई नराम्रो झ´ड्का पार्छ । सधैजसो आ´क्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने ओली हिजो नारायणहिटी अगाडिको जनसभामा फितलो देखिए ।
वि´रोधीप्रति खासै आ´क्रामक बनेनन् । उनीहरुको आलोचना संयमित भएर नरम तरिकाले गरे । यसले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्यो । बरु गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रचण्डलाई चिडियाखानामा थुन्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिए ।
ओली शुक्रबारको सभामा भावुक भए । बोल्नै नसक्ने भएर रोक्किए । आँखाबाट आँसु निकालेर पुछ्न थाले । क´ठोर मनका ओली भक्कानिएका थिए । त्यसपछि उनले खासै कडा अभिव्यक्ति दिएनन् ।
ओली हिजो फितलो देखिनुलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ । उनी कतै कमजोर त भइसकेका छैनन् ? चासोको विषय बनेको छ ।
ओलीले बरु संघीयता र गणतन्त्रको पक्षमा अ´डिग रहने स्पष्ट पारे । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन आफू सधैं लडिरहने बताएर आ´शंका मेटाउन खोजे । आफूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लामो समययता ल´डेको स्म´रण गराउँदै कसैको भ्रममा नपर्न आ´ग्रह गरे ।
ओलीले सं´घीयता र गणतन्त्रको पक्षमा नारायणहिटी अगाडि उभिएर स्पष्ट पारेपनि धर्मको विषयमा केही बोलेनन् । वैशाखमा चुनाव गर्ने दृ´ढता व्यक्त गरे । उनले भनेः चुनाव चुनाव चुनाव ।-तस्बिरः मुकुन्द कालिकोटे